Sababta aan loo aqbali karin dhaqaaqa ay samaysay ASWJ, cidda khaladka ku leh & arrin aysan wanaagsanayn in laga duulo | Hadalsame Media
Home Maqaallada Sababta aan loo aqbali karin dhaqaaqa ay samaysay ASWJ, cidda khaladka ku...
Sababta aan loo aqbali karin dhaqaaqa ay samaysay ASWJ, cidda khaladka ku leh & arrin aysan wanaagsanayn in laga duulo
(Hadalsame) 02 Okt 2021 – Cid walba oo rabta in ay xoog ku gaarto danaheeda siyaasadeed waa cid u bareertay in ay burnuriso oo meesha ka saarto Dawlad Goboleedka Galmudug oo ah dawlad leh dastuur, xeerar iyo heshiisyo qoran oo dadka reer Galmudug ku heshiiyeen. Dabcan waxaa jira tabashooyin badan laakiin aan marnaba marmarsiinyo u noqon karin weerar iyo guluf colaadeed Galmudug lagu soo qaado.
Qolyaha Guraceel qabsaday waa kuwii dhawr sano ka hor gacanta loo geliyay 80% awoodda Galmudug laakiin ugu dambayn dharbarka ka toogtay madaxweynihii sida sharafta leh ugu tanaasulay. Sababta ay Xaaf oo awooddii maamulka farta ka saaray dhabarka uga toogteen wax kale ma ahan ee sideedaba qolyahani waxa ay diiddan yihiin in ay dhisnaato Dawlad Goboleed Galmudug la yiraahdo. Sidaas darteed kooxdaanu ku ma hardanayaan ma na hoyanayaan in ay Galmudug aakhiro u diraan.
Sidaas awgeed, shacabka Galmudug, xukuumadda Federaalka ah ee uu hoggaamiyo Maxamed Xuseen Rooble iyo Soommaalida kale dhan waxa la gudboon in ay ka hortagaan isunu kaashadaan sidii kooxdaan qaswadayaasha ah la isaga qaban lahaa.
Waa run kooxdaani ayaga oo dhintay ayaa hoggaan xumada Qoorqoor iyo hagardaamaya Farmaajo fursad siiyeen balse Galmudug waa ka wayn tahay Qoorqoor iyo Farmaajo jiritaankeedu na ku ma eka inta Qoorqoor iyo Farmaajo joogaan.
Sababahaas daraaddood waxaa Raisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisa la gudboon in ay si deg deg ah ugu gurmadaan oo ciidan ugu diraan Galmudug dib na gacanta maamulka loogu soo celiyo deegaannada ay qabsadeen kooxda u soo tafaxaydatay burburinta Galmudug.
Jiritaanka Galmudug waa daruuri aan cid laga gorgortamayn.
FG: Qoraal walba wuxuu ka tarjumayaa aragtida qoraha ku saxiixan
Previous articleRaaf ka dhan ka ah dad shacab ah oo ka socda Laascaanood (Nin halyeey qaran ah oo halkaa lagu sumcad dilayo)
Next articleAC Milan & Inter Milan oo markii ugu horreeysey taariikhda todobaadkan aanay midkoodna ku dheelayn San Siro + Sababta